किरात Archives - Suvham News
५ वैशाख, काठमाडौं । लोपोन्मुख कुसुन्डा जातिका ‘राजा मामा’को निधन भएको छ । तनहुँको ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर १० डीही गाउँमा बस्दै आएका राजा मामाको बुधबार बिहान ७५ वर्षको उमेरमा आफ्नै घरमा निधन भएको हो । उनी कुसुन्डा जातिको भाषा बोल्न जान्ने एकमात्र व्यक्ति थिए । आदिवासी जनजाती महासंघ तनहुँ जिल्ला समन्वय परिषदका निवर्तमान अध्यक्ष दीर्घ गुरुङले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारीअनुसार राजा मामा बिहान पाँच बजेतिर आफ्नै घरमा लडिरहेको अवस्थामा फेला परेका थिए । त्यसपछि घरका सदस्यहरुले उठाएर चिया पिलाएका थिए । त्यसको केहीबेरमै उनको निधन भएको हो। राजा मामा उच्च रक्तचापको बिरामी थिए । उनको निधनले लोपोन्मुख कुसुन्डा जाती र सिंगो आदिवासी जनजातीहरुलाई अपुरणीय क्षति भएको गुरुङले बताए । ‘कुसुन्डा कान्छा’ बने ‘राजा मामा’ उनलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले संरक्षण गरेर राखेको थियो । प्रतिष्ठा
Nov112017 by gsmktmNo Comments
किरात समुदाय एउटै हो । तर त्यसभित्र दुई पृथक मुन्धुम संस्कार व्याप्त छ । पहिलो हो, परम्परागत मुन्धुम संस्कार, जुन संस्कारमा बलिप्रथा व्याप्त छ । दोस्रो हो, सत्यहाङ्मा (साम्जिक) मुन्धुम संस्कार, जसले बलिप्रथा र मद्यपानलाई पूर्ण बहिष्कार गर्छ । सत्यहाङ्माहरूको मुन्धुम लिखित छ । छोरीचेलीको सोतरीत लिनदिन बर्जित गरेको छ । कुनै जमाना थियो, किरात समाज (विशेषगरी लिम्बु) मद्यपानमा चुर्लुम्म डुबेको थियो । समाज साँच्चै समाज हुनुबाट विमुख भएको थियो । त्यसलाई आमूल सुधारको खाँचो देखे, फलामसिंह लिङदेन लिम्बु (फाल्गुनन्द) ले । उनले आफ्नो समाज समुदायप्रति सुधारको नजर लगाए । र समाजमा चुम्लुङ (सभा) बसाएर दसबुँदे मुचुल्का उठाए । जुन सामाजिक दस्तावेजलाई लिम्बु समुदायमा समाज सुधारको घोषणापत्र मान्ने गरिन्छ । उनै समाज सुधारक व्यक्तित्व हुन्, राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द । उनी किरात धर्मका प्रवर्तक हुन् ।
माओवादि पार्टी एकता होइन, एमालेसँगको विलय होः गोपाल किराती
माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल किरातीले एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । पार्टी सचिवालय सदस्यहरुको सोमबार सम्पन्न बैठकमा एमालेसँग एकताको विपक्षमा उभिने उनी एक्ला नेता देखिए । अध्यक्ष प्रचण्डले त्यससम्बन्धि सातबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेलगत्तै किराती विरोधमा उभिए । पार्टी एकताबारे प्रचण्डले केही समय गरेको ‘बि्रफिङ’मा पनि उनले सहमति जनाएनन् । ‘म एमालेमा जान्नँ, माओवादी पुनर्गठन गर्छु , ‘माओवादीलाई एमालेमा विलय गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन, म विद्रोह गर्छु ।’ कम्तिमा एउटा चुनाव माओवादी भएरै लड्नुपर्ने उनको लाइन छ । सचिवालय बैठकमा किरातीले एमाले पहिचानविरोधी पार्टी भएको औंल्याएका थिए । ‘पहिचान माओवादीले उठाएको मुद्दा हो, एमालेसँग एकता गरेपछि यो मुद्दा के हुन्छ ?’ उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए । माओवादी प्रवेश गर्नुअघि
Sep242017 by gsmktmNo Comments
डा. धनप्रसाद सुवेदी---- हाम्रो गाउँमा पाखे माइला भन्ने बिजुवा धामी थिए । उनी मुन्दुम जान्ने बिजुवा हुन्, उनले झारफुक गरेपछि जस्तोसुकै बिरामी पनि निको हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । त्यसैले हाम्रा घर, टोलमा जोसुकै बिरामी हुँदा पनि पाखे माइलाकहाँ लगिन्थ्यो । मलाई पनि धेरै पटक पाखे माइलाले झारफुक गरेका थिए । सामान्य बिरामीलाई उनी मनमनै के के भन्थे र अक्षता मन्साएर झारफुक गर्थे । अलिक सिकिस्त बिरामीलाई झारफुक गर्दा भने लय हालेर मन्त्र पढ्थे । उनको लयबद्ध मन्त्र कुनै गीत जस्तो लाग्थ्यो, अर्थ नबुझे पनि सुनिरहुँ लाग्ने । त्यसरी लयबद्ध मन्त्र पढेर झारफुक गरेपछि उनी भन्थे— लौ मैले मुन्दुमबाट देवीदेवतालाई पुकारा गरेको छु, देसानमेसानले दुख दिएको रहेछ भने सन्चो हुन्छ । वैशाखे पूर्णिमादेखि गाउँमा साकेला नाचको रौनक सुरु हुन्थ्यो (अहिले पनि हुन्छ) । जुन घरमा ढोलझ्याम्टा बज्न थाल्थ्यो हामी दौडँदै त्यही घ
काठमाडौँमा आठ दिनसम्म धूमधामका साथ मनाइने येँयाः (इन्द्रजात्रा) आइतबार सकिएको छ। यही जात्राका अवसरमा वंघः (इन्द्रचोक) मा रहेको आकाश भैरवको मूर्तिलाई मन्दिरबाहिर प्रदर्शन गरिन्छ। खासमा इन्द्रजात्रा कुमारी जात्रा, इन्द्रजात्रा र भैरव जात्राको संयुक्त रुप हो। त्यसै कारण श्वेत भैरवसँगै आकाश भैरव मात्र हैन टोलटोलमा अन्य भैरवहरु पनि प्रदर्शन गरिन्छन्। इन्द्रको मूर्तिलाई त बाँधेर नै राखिन्छ। डा. साफल्य अमात्यको ‘श्री आकाश भैरवनाथ’पुस्तकमा उल्लेख भएको किंवदन्ती (पहिलेदेखि भन्दै/सुन्दै आएको तर प्रमाण नभेटिएको कुरा) अनुसार यलम्बर भन्ने – किराँती राजाले इन्द्रचोक अर्थात् वंघःमा आफ्नो राजघर बनाएर बसेका थिए। नेवारहरुले आकाश भैरवलाई आजु द्यःको रुपमा पूजा गर्छन् र यलम्बरकै प्रतीकका रूपमा नेवारले मान्ने गर्दछन्। अर्को किंवदन्ती अनुसार महाभारतको युद्धमा जाँदा भगवान् कृष्णले छल गरी काटेको यलम्बरको शिर